1.How re-download songs si iCloud
2.How ka ihichapụ achọghị ma ọ bụ oyiri songs si gị iPhone iji iCloud
iCloud, igwe-oji nchekwa na ọrụ site na Apple, bụ N'ezie, otu n'ime ihe ndị kasị-eji na ụwa, niile ekele na-eto eto ọnụ ọgụgụ nke iOS ọrụ nke bụ naanị na-amụba ụbọchị. E wezụga nke ahụ, ọ bụkwa a bara uru ọrụ na-enye anyị otu nhọrọ nke na-akpakọba data dị ka photos, akwụkwọ na kasị mkpa nke ihe nile, music na anyị nwere ike mgbe ahụ ịkọrọ mfe na ndị ọrụ ndị ọzọ. Onye na-agaghị achọ ịkọrọ ezigbo uto nke music na ndị ọzọ, nri?
Otú ọ dị, dị nnọọ ka ọ bụla ọzọ na-esi n'aka nchekwa, ọ bụ omume na ị pụrụ ma ejedebe adịkwa ọkacha mmasị gị music on iCloud ruru mberede nhichapụ ma ọ bụ ejedebe na oyiri mbipụta nke songs, ma na-adịghị ahụkebe na bụghị otú ịnabata dị ka mma.
Anyị na-aga ịkekọrịta ụfọdụ nnọọ uru Atụmatụ na otú jikwaa music on iPhone iji iCloud.
Part 1 Olee re-download songs si iCloud
Ẹkedori iTunes ngwa gị iPhone
Ozugbo iTunes emepe, pịa bọtịnụ 'Ọzọ' na ala ngalaba maka igodo.
Ugbu a, họrọ nhọrọ nke 'zụrụ'.
Na-esote na ihuenyo, họrọ 'Music' site nhọrọ depụtara na n'ihu gị.
Mgbe ahụ, họrọ nhọrọ nke 'Ọ dịghị on Nke a iPhone' site n'elu ngalaba nke ọzọ na ihuenyo. Ọ ga-hụ na ị na-ahụ naanị music na-adịghị ama-ibudatara na gị iPhone.
Ugbu a, pịa na music aha na ị chọrọ re-download wee pịa na 'Cloud' icon nri na-esote ya na-amalite download.
Part 2 Olee ka ihichapụ achọghị ma ọ bụ oyiri songs si gị iPhone iji iCloud
Ọ bụ ọsọ na-ahụ na e nwere otu ọtụtụ achọghị songs gị iPhone. Anyị maara nke a n'ihi na anyị ekwuwo okwu na otutu nke ndị n'ezie enen banyere otú ha bịara na-achọghị na ma ọ bụ oyiri songs na ha iOS ngwaọrụ, iPhone ihe atụ. The ezigbo nke bụ mgbe ị na, n'agbanyeghị ugboro ole ị na-agbalị, na-enweghị ike ihichapụ ndị a na-achọghị songs si gị music collection on Apple.
Ọ bụrụ na gị onwe gị kwa na-aga site a nsogbu, echegbula ọzọ dị ka anyị bụ banyere na-agwa gị a di na nwunye nke ezigbo mfe ụzọ nke tackling ọnọdụ a na ịlụ Bibie mmezi songs.
1) Gaa Ntọala> Music na mgbe ahụ ịgbanwee na 'Gosi All Music', nke a bụ iji hụ na ị na-enwe ike ịhụ ihe niile songs na i nwere, ma ebudatara ma ọ bụ na ígwé ojii.
2) Ugbu a, na-emeghe music ọkpụkpọ na gị iPhone na-ahụ song na ị chọrọ ehichapụ, ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ ígwé ojii icon nri na-esote ya, enweta na na akara ngosi na ibudata na song gị iPhone. Ozugbo mere, ihichapụ ya.
1) ihe magburu onwe ọzọ maka n'elu usoro bụ iTunes egwuregwu iji nke ị nwere ike mfe ihichapụ bụla na-achọghị songs na gị iPhone. Iji malite Otú ọ dị, hụ na ị na-tụrụ ụtụ iTunes egwuregwu. Gaa na Ntọala> Music na mgbe ahụ ịgbanwee on 'iTunes egwuregwu'.
2) Ẹkedori ke Music ngwa gị iPhone na-aga More> Songs si navigation ngalaba na ala. Ozugbo ndepụta nke songs Pop elu, mfe swipe na ihichapụ ndị ị na-adịghị mkpa.
> Resource> iCloud> Olee re-download Songs na Hichapụ achọghị Songs si iCloud on iPhone